Maraakiib Sidda Shidaal Wasakheysan Oo Ku Soo Xidhay Haamaha Keydka Shidaalka Berbera Iyo Gaadiidka Batroolka Ahaa Oo Wada Ciladoobay | Berberatoday.com
April 12, 2018 - Written by Berbera Today
Hargeysa(Berberatoday.com)-Keydka Haamaha shidaalka ee magaalada Berbera
ayaan maanta wax shidaal ahi aanu ka soo bixin kadib markii shidaalkii halkaasi lagu shubay uu noqday mid wasakhaysan oo xabag leh oo waxyeelo u geysanaya gaadiidka lagu shubo gaar ahaan baabuurta batroolka ah.
Booyadaha shidaalka ka soo qaada hamaha Keydka shidaalka ee magaalada Berbera ayaa dib loogu celiyey kuwoodii la soo dhamaamiyey maanta kadib markii la arkay shiidaalka batroolka ah ee ay sidaan inuu wasakhaysan yahay oo dhibaato ugaysan karo gaadiidka lagu shubo.
Saddexdii markab ee ugu danbeeyey ee ku soo xidha haamaha shidaalka ee magaalada Berbera markii la baadhay waxa soo baxday in shidaalka ay keeneen uu yahay mid xabag leh (Wasakheysan) sida ay noo xaqiijiyeen ganacsatada kaalmaha shiidaalka Berbera iyo Dadka gaadiidka yaryar ee Batroolka ah wata oo ciladi ka gashay gaadiidkoodii oo geerashyada wada yaala ilaa hadana ciladooda la saari layahay.
Keydka shidaalka ee magaalada Berbera waxa dhex yaala LAB ama qalab lagu eego tayada shidaalka dalka soo gelaya bal se shirkaddaha shidaalka soo dejiya oo iyagu gacanta ku haya qalabkaasi ayaan muhiimad siinin natiijada ka soo baxda shidaalka ay dalka keenaan.
Shirkaddaha Red Sea iyo Haas oo ka mid ah shirkaddaha shidaalka ka soo waaridka magaalada Dalka debediisa ayaa ah shirkaddaha hadda keenay markiibta sidda shidaalkani wasakheysan ee xabagta leh.
Masuuliyiinta keydka haamaha shidaalka Berbera BOG oon isku dayey in aan wax ka weydiiyo arrintani noomay suurto gelin.
Waxa kale oo xusid muddan ganacsatada gacanta ku haysa keydka shidaalka haamaha ee magaalada Berbera in ay iyaga uun keenaan shidaalka dib u sii iibiyaan.
Ugu danbeyntiina gaadiidka qaada shidaalka oo hadda hor tuban keydka haamaha shidaalka Berbera waxay diideen in ay qaadaan shidaalka wasakheysa halka ay kuwo kaloo la dhaamiyayna soo celiyeen